Pamusoro peKukungura nepeSarudzo Dzine Ushingi - Dieter F. Uchtdorf
Pamusoro peKukungura nepeSarudzo Dzine Ushingi
NeMutungamiri Dieter F. Uchtdorf
Mutevedzeri weChipiri muHutungamiri Hwekutanga
Apo patinozvipira pakutsvaga utsvene nerufaro, kashoma kuti tizove munzira yezvikunguro.
Mutungamiri Monson, tinokudai. Tinokutendai nechiziviso chakafemerwa uye chinokosha pamusoro pekuvakwa kwematemberi matsva nezvemushando wevashumiri. Nokudakwazvo, ndinechokwadi kuti maropafadzo makuru achauya kwatiri nekuzvizvarwa zvizhinji zvamangwana.
Vadiwa mabhuratha nemasisita angu, vadiwa shamwari dzangu! Tose tiri vanhu vanofa. Ndinovimba izvi hazviuye sechishamiso kuna aninani.
Hakuna mumwe wedu achazova panyika kwenguva yakareba zvikuru. Tine nhamba yemakore akakosha ayo, mumaonerwo ezvekusingaperi, haatomboenzana nekubwaira kweziso.
Zvino tobva taenda. Mweya yedu “inoendeswa kumusha kuna Mwari akatipa [isu] upenyu.” 1 Tinoradzika miviri yedu pasi uye tosiya kumashure zvinhu zvenyika ino apo patinoenda kuumambo hunotevera hwekurarama kwedu.
Apo patinenge tiri vadiki, zvinoratidzika sekuti tichararama nokusingaperi. Tinofunga kuti kune kubuda kwezuva kusina mugumo kwakamirira kuri mumhiri memuchecheto, uye ramangwana rinoratidzika kwatiri senzira isina ganhuro inoenderera zvisingaperi mberi kwedu.
Zvisinei, apo patinokura, ndipo patinyanya kutarisa kumashure tichishamisika nemapfupikiro akanyatsoita nzira iyoyo. Tinoshama kuti makore akafamba nekukurumidza kudaro sei. Uye totanga kufunga pamusoro pesarudzo dzatakaita uye nezvinhu zvatakaita. Mukudaro, tinoyeuka nguva zhinji dzakanaka idzo dzinopa kudziirwa mumweya yedu nerufaro mumwoyo yedu. Asi tinoyeukawo zvikunguro—zvinhu zvatinoda kuti dai taikwanisa kudzokera shure tichinozvishandura.
Mukoti anochengeta vanehurwere husingarapike anoti kazhinji aibvunza mubvunzo wakareruka kuvarwere vake apo pavaigadzirira kubva muupenyu huno.
“ Mune zvikunguro zvamuinazvo here?” aivabvunza.2
Kuva padyo kudaro nezuva iroro rekupedzisira reupenyu hwenyama zvinowanzopa jekeso kupfungwa uye zvinopa nzwisiso yemaonero nemafungiro aunoita chinhu.Saka apo vanhu ava pavakabvunzwa pamusoro pezvikunguro zvavo, vakazarura mwoyo yavo. Vakafunga pamusoro pekuti ndezvipi zvavaizoshandura dai chete vaikwanisa kudzorera nguva kumashure.
Apo pandaifunga zvavainge vataura, pakarepo ndakabva ndaziva mashandurirwo anokwanisa kuitwa nzira yeupenyu hwedu zvakanaka nemisimboti yekutanga yevhangeri raJesu Kristu,kana chete tikaishandisa.
Hapana chakavanzika pamusoro pemisimboti yevhangeri. Takainzvera mumagwaro matsvene, takaikurukura muChikoro cheSvondo, uye takainzwa kubva munhaurwa nguva dzakawanda. Misimboti nemwero yemagariro mitsvene iyi iri pachena uye yakajeka; yakanaka, yakadzama uye yakasimba; uye inonyatsokwanisa kutibatsira kudzivirira zvikunguro zveramangwana.
Dai Ndakaziva Ndakapedza Nguva Yakawanda neVanhu Vandinoda
Zvichida chikunguro chakanyanya kufanana chakataurwa nevarwere vaiva vavakufa chaiva chekuti vaiti dai vakapedza nguva yakawanda nevanhu vavanoda.
Varume kunyanya ndivo vakaimba dunuro yakafanana iyi: vai “kungura zvikuru kuti vakapedza upenyu hwavo hwakawanda kudaro pamushando wainetesa we[zuva rega rega] we … basa.” 3 Vazhinji vakarasikirwa nendangariro dzakanaka dzinouya kubva pakupedza nguva nemhuri uye neshamwari. Vakarasikirwa nekukudziridza kubatana kwakadzama neavo vaikosha zvikuru kwavari.
Hachisi chokwadi here kuti tinowanzova nebasa rokuita rakawanda? Uye, zvinosuwisa kutaura, kuti tinopfeka kugara tiinebasa rokuita kwedu senyembe yerukudzo, sekunge kugara tiine basa rokuita, iko kuri kwega, kubudirira kana kuti chiratidzo cheupenyu hwepamusoro-soro.
Ndinofunga nezvaIshe neMuenzaniso wedu, Jesu Kristu, neupenyu Hwake hupfupi ari pakati pevanhu veGarirea neJerusarema. Ndinoedza kufungidzira Achimhanya mhanya pakati pemisangano kana kuti Achiita zvinhu zvakawanda panguva imwechete kuti apedze hurongwa hwezvinhu zvinodikanwa kuitwa nekukurumidza.
Kunze kwaizvozvo ndinoona Mwanakomana waMwari ane rudo uye ane hanya achirarama zvinechinangwa zuva rega rega. Apo paAishanda neavao vakanga Vakamukomberedza, vainzwa kuva vakakosha uye vanodiwa. Aiziva kukosha kusingaperi kwevanhu vaAkasangana navo. Akavaropafadza, akavataririra. Akavasimudzira, akavarapa. Akavapa chipo chinokosha chenguva Yake.
Mumazuva ano edu zvirinyore kungonyepedzera kupedza nguva nevamwe. Nekudzvanya mausi yekombiyuta, tinokwanisa “kubatana” nezviuru zve“shamwari” tisingambofa takava tinotarisana kana nemumwechete wavo. Tekinoroji inokwanisa kuva chinhu chakanakisisa chaizvo, uye inobatsira zvikuru apo patisingakwanise kuva padyo nevadikanwi vedu. Mudzimai wangu neni tinogara kure nenhengo dzemhuri dzinokosha; tinoziva kuti izvozvo zvakaita sei.